प्रधानको घरमा ५ बर्ष बसेका टेलिभिजनकर्मी भन्छन् उहाँबाट जा’तिय वि’भेद म कल्पना गर्न सक्दिन । – Yuwa Aawaj
प्रधानको घरमा ५ बर्ष बसेका टेलिभिजनकर्मी भन्छन् उहाँबाट जा’तिय वि’भेद म कल्पना गर्न सक्दिन ।
असार १२, २०७८ शनिबार 669
काठमाडौं : सञ्चारकर्मी रूपा सुनार प्र’करणपछि घरबेटी सरस्वती प्रधानलाई भिलेनका रुपमा देखाउन खोजिएको छ ।तर सुनार र प्रधानबीच भएको कुराकानीमा पनि जा’तीय वि’भेदको कुरा आएको छैन ।
उहाँले आफ्ना लागि कुनै समस्या नरहेको भए पनि घरमा हुनु भएकी सासुआमाका कारण स’मस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।यो बीचमा करिब पाँच वर्ष सरस्वती प्रधानको घरमा बसेका एक व्यक्तिले आफ्नो अनुभव साझा गरेका छन् ।
आफ्नो अनुभवका आधारमा पत्रकार अजय साह शिवालीले प्रधानमाथि लागेको जा’तीय वि’भेदको आ’रोपलाई इ’न्कार गर्नुभएको हो । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत पूर्व सगरमाथा टेलिभिजनकर्मी एवं अहिले अप्पन टिभीका सम्पादक रहनु भएका उहाँले एक लामो स्टाटस राख्दै यस्तो बताउनु भएको हो ।
उहाँले लेख्नु भएको फेसबुक स्टाटस यस्तो रहेको छ :करिब पाँच वर्ष सरस्वती प्रधानको घरमा बसेको अनुभवका आधारमा भन्छु, उहाँले जा’तीय वि’भेद गरेको मेरो मनले मान्दैन ।
दुई दशकभन्दा बढी समयको काठमाडौं बसाइँका क्रममा विविध कारणले कोठा सर्ने क्रम चलि नै रह्यो । यस अव’धिमा मैले ८ पटकसम्म कोठा परिवर्तन गरेँ । यसैक्रममा २०६८ तिर कोठा खोज्न म बबरमहलतिर पुगेँ ।कार्यथलो सगरमाथा टेलिभिजनको १–२ किलोमिटरको रेडियसमा कोठा खोज्ने अभियान थालियो ।
के उनीहरूले वर्षौदेखिको जातीय विभेदयुक्त मान्यताहरू पूर्ण रूपमा छाडि सके ? त्यसैले, जातीय विभेद पुस्तान्तरणसँगै न्यूनीकरण हुने हो, रातारात होइन भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ । सकारात्मक कुरा के छ भने नयाँ पुस्तामा यस्तो सोच छैन, हुनु हुँदैन । यसलाई नै पहिलो र महत्वपूर्ण उपलब्धि मानेर समयसँगै हिडौं ।
Prevआफ्नो चरित्र ह’त्या गरेको भन्दै रुपाले दिइन ९ अनलाइनविरु’द्ध प्रेस काउन्सिलमा उजुरी ।
Nextमेलम्चीमा फेरी बाढीको वि’तण्डा, तीन तले घर ब’गायो ।
बधाई ! को’रोना संक्र-मणमुक्त भए गायक प्रमोद खरेल ।
दिपक मनाङेले भने – दुईटै कि’ड्नी नभएको मान्छेको पछि किन लाग्ने ?
उपत्यकामा दैनिक १४ करोड लिटर मेलम्चीको पानी !